एकदमै कहाली लाग्दो! ह’त्कडी लगाएरै श्रीमानले गरे श्रीमतिको दाहसंस्कार… (भिडियो हेर्नस्) – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /Video/एकदमै कहाली लाग्दो! ह’त्कडी लगाएरै श्रीमानले गरे श्रीमतिको दाहसंस्कार… (भिडियो हेर्नस्)
एजेन्सी । एउटा एकदमै कहाली लाग्दो बिषय ।११ बर्षिय छोरो जस्ले भाइ र आमा पाल्दै आएका थिए । तर अहिले आमाको लास पशुपतिमा सुतिरहेको छ । लम्पसार परिरहेको छ ।उनले आमालाई पालि रहेका थिए, लप्सि झारेर भात खुवाउदै थिए तर आमा अब बितिसकेकि छिन् ।आमा बितिन, बुवा जेलमा छन् अनि यी बाबू भने एक्लै छन् । आफ्नो आफन्त भन्नेहरु पनि कोहि रहेनछन् ।चोरिको केसमा कारागार भित्र हुनुहुदोरहेछ बुवा ।
तर दाहसंस्कार गर्न भने आउन दिइयो र गरेपनि । उता सानो भाईलाइ पनि त हेर्नु पर्यो, कठै कस्तो हरिबिजोक। गुलेलिले लप्सी झा’रेर अनि त्यहि लप्सी बेचेर चामल ल्याएर भात खुवाउदै गरेका छोरो आज एक्लिएको छ । म धेरै पढेर ठूलो मान्छे बन्छु भन्दै छोरोले आमाको अन्तिम अनुहार हेरिरहे ।
आमा र भाइ पाल्ने सानो ११ बर्षिय भाइ थिए । पुनम जो भाइकि आमा हुन् जस्को पेट एकदमै सुन्निएर थन्किरहेकि हुनुहुन्थ्यो, देश बिदेशबाट पैसा जुटेपछि उहाको उपचार भैरहेको थियो ।तर भगवानलाई सायद अर्कै मन्जुर थियो ।
२ को ज्यान मध्यतमोरले…
ताप्लेजुङस्थित तमोर नदीमा निर्माणाधीन मध्यतमोर जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ मार्गमा काम गरिरहेका दुई मजदुरको माथिबाट झरेको ढु ङ्गा ले कि चे र ज्या न ग ए को छ । ज्या’न गुमाउनेमा उदयपुर घर भएका २२ वर्षीय अमर विश्वकर्मा र भोजपुर घर भएका २८ वर्षीय सन्तोष बानियाँ रहेका छन् ।
सुरुङभित्र काम गर्दै गरेको अवस्थामा आज दिउँसो करिब २ बजे माथिबाट झ’रेको ढु ङ्गा ले लागेर उनीहरुको घ’टनास्थलमा नै ज्या’न गएको आयोजनाका करण गौतमले जानकरी दिए । थुम्बाबाट मित्लुङ निस्कने आउटलेट सुरुङभित्र उनीहरू काम गर्दै थिए । घ’टनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ ।